Ny Lightweights ao anatin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Ny Lightweights ao anatin'ny GNU / Linux
Hyuuga_Neji | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, soso-kevitra
Araka ny elav nitondra anay nivoaka ny lohahevitra kely an'ny Xfce, KDE y LXDE Nomena ahy ny hevitra hanombohana zavatra toa ny adin'ny tontolo iainana.
Eny, tsy ho toy ny hoe 'ity' no tsara kokoa na amin'ny zavatra hafa, fa kosa hikarakara izay ilako (Manana PC misy fahombiazana ambany dia ambany aho). Hisy hatrany ny adihevitra momba ny tontolo iainana hampiasaina sy izay tokony hodinihintsika: inona no tadiavinay amin'ny PC-nayNa ratsy toy inona aza izy ireo dia afaka manararaotra betsaka azy ireo foana isika, ka omeko anao fotsiny ny hevitro momba ny "Vanja maivana" an'ny GNU, ka manomboka avy hatrany aho amin'ny XFCE vs LXDE.
Ny fihaonako voalohany tamin'ny XFCE Tokony ho tamin'ny taona 2008 tany amin'ny oniversite informatika (ICU) eto Kiobà dia nampiseho ahy ny namako iray Xubuntu (ny fizarana Ubuntu miorina amin'ny XFCE izay izao dia tsy tadidiko hoe inona ilay kinova na hoe inona ny isany) izay nandany loharano vitsy noho ny GNOME izay nampiasaiko tamin'izany andro izany.
El LXDE etsy ankilany, tsy dia nahalala azy bebe kokoa aho tamin'ny 2010, rehefa natolotr'izy ireo ahy Debian miaraka aminy ary tena talanjona tamin'ity birao "vaovao" ity aho, izay kely kokoa noho ny ahy Gnome. Samy miasa toy ny jiro izy roa (izay indrindra no notadiaviko) tsy mavesatra loatra ny PC, ka dia nisafidy aho LXDE ary tiako izany hatramin'ny farany fa ilay birao misy ahy izao Debian 6.0.
Mikasika ny fisehoana dia tsy maintsy miaiky aho fa samy manintona ahy izy roa raha vao jerena, izany hoe, tsy ampidirina ao ny mora (effets, animations sns) de Beryl na CompizAry ny ampahany tsara indrindra dia tsy hoe tsara tarehy fotsiny izy ireo raha jerena fotsiny fa "azo ovaina". Raha ny tena izy dia mitovy ihany izy ireo na eo aza ny tsy fitovizany na dia ekeko aza izany Xfce manana vondrom-piarahamonina lehibe kokoa noho LXDE.
Hitantsika eto ny LXDE:
ary eto amin'ny XFCE:
Amin'ny iray amin'izy roa dia azontsika atao ny manamboatra zavatra amin'ny tsindry havanana eo amin'ny birao fotsiny fa voninahitra omena izay mendrika voninahitra, XFCE raha resaka configurement dia "tsara kokoa amin'ireo vao tonga izy" noho LXDE; fa amin'ny zavatra sasany dia mandany vola kely ny fametrahana "amin'ny Internet". Mba hanaovana izany dia tokony hiditra amin'ny safidin'ny birao isika, aiza, tsy haiko raha handany fotoana bebe kokoa miaraka aminy fa hitako fa ny safidin'ny LXDE Tsotra kely kokoa noho ireo izy ireo XFCE, ireto ny sary:
Ireto ny safidin'ny birao LXDE.
Ireo no safidin'ny birao XFCE
Araka ny nolazaiko teo aloha, Xfce aseho feno kokoa noho ny LXDE... manana ny zavatra keliny aza izy na GNOME (ho ahy ilay tompon-daka amin'ny afovoany) ptaolana
Ohatra, raha apetrakao eo ambonin'ny birao rehetra ny totozy (araka ny ho hitanao amin'ny sary) Mahazo ny afisy midina miaraka amin'ireo fananana isika, izay toetra mampiavaka ny KDE (tompon-daka mavesatra mavesatra indrindra) Noho izany dia hitanao fa sary hafa no lazaiko eto:
Amin'ny maha mpitantana rakitra (mpitantana ny rakitra) XFCE fampiasana Thunar, izay ielezan'ny tsaho fa tsy te-hanatsara bebe kokoa izy ireo noho ny tahotra sao ho mavesatra. Etsy ankilany LXDE tokony PcManFM, izay hitako matanjaka kely kokoa noho ny hoe manana volomaso kely izy ary noho ny hafainganam-pandehany (hehe mora tokoa ny fanjakako), Na izany aza Thunar mahay mandray akory vinety (thumbnails) ny horonan-tsary misy plugin -izay raha tadidiko tsara- dia antsoina hoe Thunar-Thumbnailers na zavatra mitovy amin'izany.
Zavatra iray hafa azo atao amin'ny alalàn'izy ireo ny fidirana amin'ny loharanom-pahalalana amin'ny tambajotra, amin'ity lafiny ity dia tokony hanazava izany ao amin'ny Debian fony aho nihomehy (mandinika) el XFCE Tsy afaka nahita ireo zavatra nananako aho Thunar Midira amin'ny loharanon-tserasera ... saingy mandray andraikitra amin'izany aho satria nanao izany rehefa nandinika aho Xubuntu 12.04.
Tsy hiresaka momba ny tonian-dahatsoratra aho, XFCE tokony MousePad y LXDE a Leafpad, ary araka ny filazan'ny mpiara-miasa amin'ny GUTL Nanazava aho indray mandeha fa ny iray dia vita tamin'ny iray hafa, fa amin'izao fotoana izao dia novonoin'izy ireo aho ary tsy tadidiko raha Mousepad dia vita tamin'ny Leafpad na ny mifamadika amin'izany.
Isaky ny Operating System dia misy programa miandraikitra ny "fanaovana sary" sy ny fiasa amin'ny varavarankely, ary tsara foana ny manaiky fa misy mihazakazaka haingana kokoa noho ny sasany, ohatra, ny "Unity" ao Ubuntu dia mihisatra kokoa noho ny Gnome-Shell, fa raha miresaka momba ny birao maivana ary avy eo dia mila manondro ireo Window Managers maivana isika.
XFCE mampiasa manager windows izay nantsoina Xfwm y LXDE USA OpenBox (misy mpampiasa mampiasa Flubox koa) izay rindranasa matanjaka ary maninona no tsy?…, somary antitra ihany koa, ankoatr'izay tsy tongatonga ho azy miaraka amin'ilay tetikasa LXDE; fa izy kosa dia manana ny hafainganam-pandehan'ny asany sy ny fandaniam-bola kely.
Version 4.X an'ny XFCE Io no fotoana farany indrindra an'ny Xfwm ary eny dia ao anatin'ny tetikasan'ny XFCE, mety tsy ho haingana toa ny Openbox fa mitondra safidy safidy maro hafa (toy ny fitaovana tafiditra ao amin'ny XFCE tena mitovy amin'ny Gconf-Editor an'ny Gnome). Ireto misy sary sasany mampiseho ny fahitan'ny mpitantana fanaingoana azy ireo:
Mpitantana varavarankely XFCE
Na eo aza izany LXDE ny birao ampiasako amin'izao fotoana izao ary manana rindranasa marobe amin'izao fotoana izao, dia sahy milaza izany aho XFCE dia azo raisina ho toy ny birao maivana be indrindra.
Heveriko fa satria efa elaela kokoa izy no niaraka tamintsika LXDE, izay vao haingana kokoa. XFCE haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny birao hafa toa azy io GNOME y KDE fa mety misy ny mpampiasa (toa ahy) izay aleonao birao maivana maivana mandeha haingana kokoa noho ny XFCE (tinker fotsiny io ary amin'ny PC sasany dia mety tsy ho tsikaritra ny fiovana), LXDE no safidy tadiavin'izy ireo.
Misy zavatra manelingelina ahy LXDE satria tsy tsara ny zava-drehetra, ary io dia ny ampahany amin'ny fanindriana havanana amin'ny takelaka farany ambany izay mitondra menio izay lehibe loatra amin'ny tsiroko, ary im-betsaka izy ireo dia mitovy tokoa ka very amin'ny safidy ianao. ihany XFCE dia ahy (sy ho an'ny mpampiasa maro hafa) birao feno kokoa noho ny LXDE izay miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia voatendry hisolo ny XFCE (ary mamela ahy ny mpampiasa totozy).
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo takelaka roa ireo ianao dia afaka mankany amin'ny pejy ofisialiny:
Ankehitriny…. ny mpitsara ve ianao ka manomboka manome ny hevitrao 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny Lightweights ao anatin'ny GNU / Linux
Ohatra, raha apetrakao eo ambonin'ireo lahatahiry eo amin'ny birao ny totozy (araka ny ho hitanao amin'ny sary) dia mahazo ilay afisy mitete miaraka amin'ireo toetra
Ity ao amin'ny Xfce 4.10 dia tsara kokoa, satria raha sary dia asehony anao na dia ny thumbnail aza, miaraka amin'ny fananany.
Thunar aza mahavita maka Thumbnails (thumbnails) amin'ny horonan-tsary misy plugin -izay raha tadidiko tsara- dia antsoina hoe Thunar-Thumbnailers na zavatra mitovy amin'izany.
Thunar dia mahavita manao an'io amin'ny alàlan'ny Tumbler avy ao aoriana 😀
Zavatra iray hafa azo atao amin'ny alalàn'izy ireo ny fidirana amin'ny loharanom-pahalalana, amin'ity lafiny ity dia tsy maintsy hazavaiko fa ao amin'ny Debianako rehefa nipaipaika (nitety) ny XFCE aho mba hahitako ireo zavatra nananany, tsy azoko atao ny mahazo an'i Thunar hiditra amin'ny loharanom-pahalalana ... saingy mandray andraikitra amin'izany aho satria nanao izany rehefa nandinika ny Xubuntu 12.04 aho.
Misy fonosana sasany tsy maintsy apetraka hanatanterahana izany. Ohatra, raha te hanana sftp ao Thunar ianao dia mila mametraka:
Lahatsoratra tsara .. !!!
Lahatsoratra tsara ^^
LXDE dia mampiasa OpenBox (misy mpampiasa mampiasa Flubox koa)
Manontany tena aho hoe iza no manana toy izany? : p
Hahaha .. haiko, anontanio aho, anontanio aho !!!
Tsara izany, iza no manana an'io toa izao?
Yo soy Izy ireo dia Rohy, "hackear"Kaontin'i Manuel (ny teny miafin'i heck dia" tiako Hello Kitty ").
Lazao amiko hoe, iza no manana an'io toa io?
Manakana ny zava-mahadomelina dadatoa XD i Manuel.
Izaho no manana an'io toa izao.
Misaotra Anonymous Nahazo ny kaontiko aho, ary te hilaza fotsiny Izy ireo dia Rohy aza mitsangana mandainga araka ny tiako Hello Kitty; ny tena tsiriko dia lehilahy kokoa, toa ny The Fairly Oddfather. 😀
Luweeds dia hoy izy:
Mpampiasa lxde efa taloha aho, ary mila milaza aho fa raha te-hizaha ianao dia afaka mahazo lxde miaraka amin'ny fisian'ny maoderina kokoa noho ny pikantsary mahazatra an'ny lxde vao napetraka (bokotra fisaka, lokon'ny tontonana ary opacity ( ny fitondran-tenany azonao atao koa ny manamboatra), lohahevitra ho an'ny Openbox, fitondran-tena ao am-baravarankely ... safidy betsaka. Raha hametraka lafy iray, raha milaza fa ilay mpandefa fampiharana lxde (Alt + F2) dia tena ratsy tarehy ary tsara kokoa "dmenu" izay mahatalanjona ihany koa.
Tontolo iainana faran'izay kely dia kely: Archlinux + Openbox + dmenu ary samy manana ny fonosany 😉
Miarahaba ny triatra rehetra!
Mamaly an'i Luweeds
Lahatsoratra tsara! Manome fanampiana bebe kokoa ahy amin'ny fotoan-tsarotra misy ahy io ... Manana HP mini 2133 aho izay apetrako ny Ubuntu 12.04 miaraka amin'ny Unity 2d (tena nanao izany tamin'ny hevitra hoe "amin'izao fotoana izao") Fa hatreto dia niasa tsara ho ahy izy ary nahatsapa ho nahazo aina, Maikel Llamaret (saika tokony hahafantatra an'io ny admin rehetra eto) dia nanoro hevitra ahy ny hametraka ny 12.04 mifandimby ary noho izany napetrako eo amboniny ny iray amin'ireo mavesatra maivana. Tena tsy vitako izany noho ny tsy fahampian'ny fotoana ... ary satria mbola tsy nanapa-kevitra aho hoe iza amin'izy roa. Saingy heveriko fa hanao fitsidihana ny XFCE aho.
PS (Ary miala tsiny Offtopic): Neji, avy aiza ny diplaomanao ??? Inona ny zavatra nataonao ry Dota na WoW ??? Fantatrao ny nick anao.
Haha eny, izaho dia avy amin'ny fizarana faha-4 ary ny anaram-bosotra hitanao fa mitovy amin'ny Bnet nilalao DOTA izay nilalao WoW tany amin'ireo mpizara maro tao (na dia tao amin'ny WoW dia nahita ahy ihany koa ianao hoe Aeon a Draenei / Troll Shaman ankoatran'i Neji iza no Rogue) fa ity bilaogy ity dia tsy miresaka momba ny lalao Blizzard eto izahay ho an'ny GNU / Linux raha tianao ny fijerin'ny mini anao miaraka amin'i Ubuntu, andraso ny hahitanao azy amin'ny Xubuntu na Lubuntu (miaraka amin'i Xfce na LXDE).
Malahelo an'i Xmonad ianao, ary ny E17 miampy ny tetikasa Pantheon, miandry anao amin'ny lahatsoratra hafa aho. Avy amin'ny gnome 2 mankany Mate aho ary avy eo nankany XFCE manana ATi izay tsy mifanaraka amin'ny Mutter / Muffin.
Solus OS 2 dia manomana Gnome 3 miaraka amin'ny fahaizan'ny Gnome 2, izay hanandrana tokoa aho.
Ny OS tiako indrindra dia ny Sabayon 9 XFCE na dia mampiasa Xubuntu "cool" toa an'i Voyager aza aho satria tsy manohana intsony ireo mpamily tompon'ny ATi 4250 ahy ilay Sabayon Xorg vaovao.
Heveriko fa tsy miova izany, mila manome fotoana ny Enlightenment ianao, izay eo amin'ny haavon'ny tontolon'ny birao.
Ny sary mihetsika E17 dia tsara tarehy ary tsara ny mpandefa fampiharana azy, saingy mila lohahevitra marobe izy io mba "hanahaka" ny rindranasa qt sy gtk.
Ary tsy ho ela ao anatin'io lisitra io dia ho KDE
Ikey henoy ianao .. hoy aho .. Andriamanitra mihaino anao !! hehe ..
Ity misy sary vaovao an'ny LXDE (Lubuntu ho marina), mba tsy hahita ilay sary ratsy ireo izay mahita ity birao voalohany ity: http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2012/099/4/1/l12_04_by_comsl-d4vlidb.png
Ary ny XFCE dia efa napetrak'i Elav tao amin'ny lahatsoratra teo aloha (A Debian toy izany, TIA ITY !!) ..
Manazava aho, izaho no EX Acute Versionitis, avy amin'ny Linux Mint KDE, Ultimate Edition, ary ireo PseudoDistros hafa izay manova ny sary an-tsehatra fotsiny, nanomboka nametra-panontaniana aho ny amin'ny fisiana, hatramin'ny "fahamatorana?" Nasehony ahy fa efa mihatsara amin'ity aretina ity aho (izay mahafinaritra) hehe ..
Toa nahomby tokoa ity lahatsoratra ity. Mampiasa bebe kokoa ny boaty misokatra aho, ary mahazo aina tsara. Na dia manaiky daholo aza isika fa hybrid, kely avy eto, kely avy any. Ankehitriny, te-hanampy aho fa misy tontolo maivana tena tsy hita ihany koa. Ny tiako holazaina dia toy ny mpitantana WM maro, sy ny tontolo iainana heveriko fa mifarana eo.
Aaron Mendo dia hoy izy:
Hitako fa tena mahaliana ireo tontolon'ny birao ireo, nampiasaiko izy ireo nefa tsy mifanaraka amin'ny tsapako, fa izay mpampiasa tia azy ireo dia mety tena ilaina. Raha ny fanazavana, tsingerintaona faha-15 an'i GNOME androany http://www.happybirthdaygnome.org/ Mampahafantatra anao aho raha toa ka liana amin'ny famoahana lahatsoratra momba izany ianao.
Valiny tamin'i Aaron Mendo
Mpampiasa LXDE iray hafa eto, hehe.
Rehefa nifindra tany amin'ny sampana 3.x i Gnome dia nitady ny fahatsorana aho ary tonga tany Xfce aloha ary avy eo tany LXDE. Marina fa manana safidy fikirakirana betsaka kokoa noho ny LXDE ny Xfce, saingy tsy maimaim-poana izany plus izany, satria mavesatra kokoa ny tontolo iainana, izay no teboka tsy itovizako hevitra momba ny lahatsoratra. Holazaiko fa Xfce dia kilasy afovoany fa tsy maivana. Fotoana vitsy lasa izay, fa ankehitriny dia hafa ny zava-misy. Etsy ankilany, maivana ny LXDE; kely, tena kely, mavesatra noho ny Openbox fotsiny izy. Raha ny marina, nandritra ny fotoana kelikely dia nampiasa Openbox aho, fa satria niaraka tamin'ny ambin'ny tontolo LXDE dia nahazo tombony betsaka aho tamin'ny lanja kely dia kely dia nijanona niaraka tamin'i LXDE aho. Ary faly.
Marina izay lazain'i Luweeds, LXDE dia mety ho azo ovaina amin'ny famaranana tsara tarehy. Ohatra, amin'ny famolavolana kely dia kely ianao dia afaka mahazo zavatra toa ny biraoko: http://www10.pic-upload.de/14.08.12/u2y8472c1t2.png. Ary raha tianao ny dock ... maninona ampio iray raha afaka manampy takelaka ambany ianao (izay azo avela afenina miafina ary ny habeny sy ny fiaviany dia azo ovaina) miaraka amina mpandefa fotsiny: http://www10.pic-upload.de/15.08.12/vdrbidel73nj.png.
Tokony hiaiky aho, eny, izaho dia tia minimalism sy fitambarana manan-danja, ka fantatro fa ny fahatsorana izay tiako be amin'ny hafa dia toa zavatra manakaiky ny tsy fisian'ny safidy. Fa farany, izany - amin'ny fampiasana ilay ohabolana malaza be mpampiasa indrindra - ho an'ny tsiro, loko.
Nampiasako roa ary ny vidin'ny enti-manana dia mitovy (mampitaha Xubuntu amin'ny Debian LXDE) izany no mahatonga ahy mieritreritra fa XFCE dia azo raisina ho maivana. Izay tsapako fa mandray ny felatanana i LXDE dia ao amin'ny hazavana, mahatakatra ny hazavana toy ny hafainganan'ny tontolo iainana.
Thunar dia efa manao azy tsy misy plugin momba ny sary kely an'ireo horonan-tsary.
"Raha fintinina, XFCE dia ho ahy (sy ho an'ny mpampiasa maro hafa) birao feno kokoa noho ny LXDE, izay rehefa mandeha ny fotoana dia natao ho solon'ny XFCE (ary mamela ahy ny mpampiasa totozy)."
Mamela anao aho, saingy tsy azoko ny antony, efa nanandrana roa aho ary efa niaraka tamin'ny Xubuntu nandritra ny herintaona ary tsy nikasa ny hiova.
Izaho dia Xfce bebe kokoa, maivana (ho ahy dia misarika kokoa amin'ny antonony), azo ampiharina sy feno amin'izay tadiaviko.
Ilay nanaitra ahy tamin'ny fizarana dia xubuntu, mandeha tsara izy, ho ahy hatreto no tsara indrindra amin'ny buntus.
Angamba izy dia iray amin'ireo xfce mavesatra indrindra, ary betsaka kokoa raha ampitahaina amin'ny debian Xfce, fa mitondra zavatra maro hafa koa.
Raha ny amin'i Lxde, ilay nanaitra ahy dia ny lxde an'i Rosa Linux, hitako fa tena tsara ary mandeha tsara,
tena tsara ny lahatsoratra !!
Raha ny fahitako azy ireo dia ny tontolon'ny desktop linux roa tsara indrindra, mampiasa xfce amin'ny xubuntu aho ary manana birao izay ankoatry ny fandaniana kely sy manome ahy izay ilaiko rehetra, tena tsara izany noho ny fomba nanamboarako azy, lxde tena tsara koa, saingy hitako fa azo ampifanarahana kokoa ny xfce.
Salama, tsy te-hanolana (betsaka) aho naneho hevitra momba azy ireo saingy tsy nilaza tamiko izy ireo hoe aiza no ahafahako misintona ny fitsapana an'i Debian miaraka amin'i Xfce? Nijery aho, na dia amin'ity tranokala ity aza ary lahatsoratra avy any Elav ihany no hitako fa ny mametraka azy avy hatrany am-boalohany ary toa kely loatra amiko izany heh! Ny tiako holazaina dia, asa kely.
Etsy ankilany, Mint Mate no ampiasaiko izao ary manana 100 GB hametrahana an'i Debian aho (nandany 9 volana niaraka tamin'io aho ary tsy te hanadino azy toy izany fotsiny) ary te hanontany anao ny fomba hanaovana izany aho. izany-raha azo atao- mizara HD sy / trano mitovy izy ireo.
Manantena aho fa afaka mamaly ahy ianao!
Azonao atao ny misintona azy avy amin'ity rohy ity:
Misaotra, che. Ankehitriny, tsy hisy ny olana hizaran'izy ireo / trano sa hamporisihinao hanome ahy ilay mifanitsy / sy / trano amin'ilay distro vaovao aho?
Ny / tsy mety hitovizany, ny / trano dia azo zaraina fa tolo-kevitra ny hanana ny distro tsirairay avy, satria tadidio fa voatahiry ao ny configurement ary mety hanana olana ianao.
Tsy azo apetraka matetika ny sary isan-kerinandro. Tsara kokoa ny manoro ny kinova miorina.
Azo antoka fa izy roa ireo, ny tiako indrindra dia Xfce, mahatsiaro ho maivana kokoa noho i Lxde aho.
Tiako kokoa ny LXDE ary XFCE dia safidy tsara tokoa.
Valiny tamin'i Arturo Molina
Paositra tena tsara, samy tia ny birao roa, fa mandraka ankehitriny ary raha mbola mihazakazaka ... Mbola mampiasa MATE aho, noho ny antony azo amboarina. 🙂
Tsy isalasalana fa fampitahana somary ampahany na eo aza ny fampiasana LXDE, hitako ao amin'ny XFCE karazana fampiononana gnome + fanjifana ambany ...… Androany miaraka amin'ny masinina ondrilahy 2-4GB no ahitanao azy manidina amin'ny KDE, fa samy manana ny tiany avy , ary ho an'ny disro, mpitantana varavarankely, loko ary fiteny amin'ny fandaharana xD
mandeha ho azy fa mampiasa a
Debian + XFCE ary cyclic Xubuntu
Saingy fantatro ny tombotsoan'ny LXDE ary ho an'ny fitaovana netbook dia ny fanalahidy sy ny fanamorana, indrindra satria toa ny superbar an'ny windows XP izy io ary avy eo toa mahazo aina kokoa amin'ireo vaovao.
Samo dia hoy izy:
Raha mila maivana ianao, ampiasao ny blackbox, amin'ny raspberry ahy dia misintona tsara lavitra noho ny lxde fa raha mila bara faran'izay mafy toa ny Windows XP, KDE, Gnome ianao dia ampiasao ny LXDE mazava ho azy fa maivana kokoa amin'ny lafiny rehetra izy io saingy misy fotoana toa ny voaroy izay tena ilainao lavitra manampy dia mandany loharano bebe kokoa.
Mamaly an'i samo
kone9 dia hoy izy:
salama daholo aho manana pentium 4 2.3 mhs tsy misy video core core 3dfx series 3000 256 disk disk 10 gb I manadihady linux slitaz 4.0 ary ny marina tsy ampitahaina amin'ny.
mametaka puppy 5. 4. 1 linux izay haingana be ary manana fitaovana maro, saingy tsy naharesy lahatra ahy i slitaz nanaparitaka azy tamin'ny hafainganana ary tsy nanana zavatra hitsiriritra ny tontolon'ny sary, te-hametraka lubuntu aho ary nianjera ny pc, tsy nandeha ny xubuntu, afa-tsy ubuntu.raha misy olona afaka manampy ahy hametraka ireo mpamily horonantsary ao amin'ny linux slitaz dia tiako be izany satria tsy afaka milalao ny emulator sega izay manazava ny efijery ary raha apetrako amin'ny efijery feno dia manjary pc.
Mamaly an'i kone9
Zavatra iray tena mahaliana momba ny LXDE dia ny OpenBox miasa tsara kokoa amin'ny mpamily nVidia tompony mamela anao hilalao horonantsary FullHD tsy misy olana ary miaraka amin'ny tontolo hafa dia mifanaraka amin'ny horonan-tsary fotsiny izany, aleo tsy hiteny hoe firaisankina ...
Ho an'izay fotsiny, raha mijery horonan-tsary ianao dia aleony. Mampiasa Lubuntu 12.10 aho izao ary manintona, tafondro.
Linux, tena diso fanantenana aho, mieritreritra aho fa hiverina amin'ny guindows, mahazo aina, ary miaraka amin'ireo rindranasa tsotra an'arivony hanao izay ao an-tsaiko. Ao amin'ny linux, ny fampiharana toa ny an'ny fandresena dia mila nohosorana. Libreoffice dia tsara, fa ao amin'ny Microsoft Office, misy fitaovana tsara kokoa, mba hahafahako mitohy hatrany. Mahamenatra. Linux dia mbola "crude" na "sarotra" ihany.
Juan Camilo Valencia dia hoy izy:
"marokoroko"? Tena matotra ve? Aleo mankany Window $. Avelany ho anao ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i Juan Camilo Valencia
cova dia hoy izy:
Izaho dia mpampiasa debian nandritra ny herintaona, avy amin'ny guindous ihany koa aho ary lasa be herim-po ary nametraka debian (na dia lazain'izy ireo aza fa io no sarotra indrindra ianarana hampiasa) ary azoko lazaina fa ny debian sy ny distro linux maro dia maro kokoa Ny rafi-pandaminana izay manjombona, ohatra ny birao izay lazainao fa mihazakazaka amin'ny debian miaraka amin'ny divay aho, miaraka amin'ny guindous dia manana viriosy, efijery manga, mangatsiaka tsy tapaka amin'ny Internet ianao, henjana dia miankina amin'ny daqt no tianao holazaina, ratsy tarehy izy io amin'ny voalohany fa misy fomba maro hanamboarana azy ...
Mamaly an'i cova
marokoroko? tsy misy fampiharana? wtf. Tontolo inona no iainanao? XD iza no nametraka redhat 1.0 mba hitenenanao izany? maninona no tsy hazavainao amiko 😛 hahaha
Tsy misy toa an'i Bodhi linux ny tsara indrindra amin'ny rehetra
leander dia hoy izy:
Fiarahabana manana solosaina nametrahako ny Ubuntu 13.04 mihazakazaka tena miadana, ary nanandrana tamin'ny xfce aho ary nihatsara, nandany 700 mb ubuntu, conxfce, nandany ondrilahy 340 mb. saingy nahatsiaro somary miadana ilay makina, dia nametraka LXDE aho, ary ondrilahy 240 mb fotsiny no laniny ary nohatsaraina haingana ny fitaovana. Ny fandrefesana fahatsiarovana dia tsy misy programa misokatra.
Mamaly an'i leandro
Oliver dia hoy izy:
Soa ihany fa manana loharanom-pahalalana tsara ny solosaina findaiko, satria tamin'ny fotoananao dia naniry ny hanandrana lubuntu aho, noho ny fanehoan-kevitra ataon'izy ireo momba ny "lalitra" amin'io karazana solosaina io, tiako izany fa nanana olana tamin'ny mpamily aho ka nanandrana kubuntu, tena tsara fa mbola nanome ahy olana be dia be amin'ireo mpamily, te hampiasa ilay goba ary tsy misy zavatra hafa tsy ho faty, raha fintinina dia nivadika xubuntu aho ary na dia ratsy tarehy aza aho raha ny fahitana azy dia namboariko araka ny itiavako azy, ary ilay 4.10 vaovao amin'ny alàlan'ny default dia tena tsara , Nijanona tamin'io iray io aho, tsy nisy olana intsony, na ho sangisangy manandramana firaisankina
Valiny tamin'i Oliver
Pekwm xD no ampiasaiko !!
Linaro dia manatsara ny fahombiazan'ny Android 4.0.4 hatramin'ny 100%